Vietnam inovhurazve chitsuwa chePhu Quoc kuti chiwane vajekiseni zvizere vashanyi vekunze
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Vietnam Kuputsa Nhau » Vietnam inovhurazve chitsuwa chePhu Quoc kuti chiwane vajekiseni zvizere vashanyi vekunze
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • Shopping • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Vietnam Kuputsa Nhau
Vietnam inovhurazve chitsuwa chePhu Quoc kuti chiwane vajekiseni zvizere vashanyi vekunze.
Vese vashandi vanoshanda munzvimbo dzesevhisi dzechitsuwa uye 99% yevagari vakuru vePhu Quoc vakabaiwa zvizere hutachiona hweCOVID-19.
Chitsuwa chezororo cheVietnam che Phu Quoc vakagamuchira vanopfuura mazana maviri vakabayiwa zvizere vashanyi vanobva kuSouth Korea nhasi.
Vashanyi vekuSouth Korea ndivo vekutanga vashanyi vekunze kuVietnam kubva nyika yakavhara miganhu yayo yakavharwa anenge makore maviri apfuura kumisa kupararira kwehutachiona hwekoronavirus.
Vietnam yakavhara miganhu yayo munaKurume 2020, nguva pfupi yapfuura mushure mekusimbisa nyaya yayo yekutanga yakataurwa yeCCIDID-19.
Kubvira ipapo, Vietnam yakangobvumira ndege dzinoverengeka dzepasirese pasvondo nenyanzvi dzekunze, vamiriri uye zvizvarwa zveVietnamese zvinodzoka.
Vaya vanosvika kune dzimwe nyika vanofanirwa kuvharirwa kwemazuva gumi nemana mumahotera akasarudzwa kana zvivakwa zvinotungamirwa nehurumende.
Nhasi, vashanyi veSouth Korea vakatemerwa zvizere vashanyi vakaongororwa COVID-19 pavakasvika, uye kana mhedzisiro yadzoserwa, vanogona kunakidzwa nezviitiko zvese zvevashanyi pachitsuwa pasina kusungirwa kwemazuva gumi nemana.
Vashanyi vekuSouth Korea vanozokwanisa kunakidzwa vakasununguka kuona, kutenga uye varaidzo zviitiko zvinoda zvitupa zvekudzivirira.
Sekureva kweVietnam Health Ministry, vese vashandi vanoshanda munzvimbo dzesevhisi dzechitsuwa uye 99% ye Phu QuocVagari vevanhu vakuru vakabaiwa zvizere hutachiona hweCOVID-19.
Chitsuwa ichi chiri kurongawo kubayisa vana vane makore gumi nemaviri kusvika gumi nemanomwe ekuberekwa mwedzi unouya.
Vietnam ndiyo nyika ichangoburwa muAsia kubatana neThailand, Indonesia neMalaysia mukuvhurazve miganhu yavo kune vashanyi vekunze vakabayiwa zvizere.
Thailand ndiyo yaive yekutanga yatanga kubvumidza huwandu hushoma hwevashanyi vekunze vakabaiwa zvizere kuchitsuwa chePhuket vasati vawedzera kune dzimwe nzvimbo, kusanganisira Bangkok, kutanga kubva Mbudzi 1.
Chitsuwa chevashanyi cheIndonesia cheBali chakavhurwa kune vanosvika mwedzi wapfuura nezvimwe zvirambidzo zvinosanganisira kuyedzwa uye kugara kwehotera kwemazuva mashanu.
Malaysia yakavhura chitsuwa cheLangkawi pasi pemutyairi 'COVID-19 bubble' chirongwa.